Siyaasadda Helitaanka Websaydhka | Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward
Websaytka Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward waa inuu u furan yahay qof walba, oo ay ku jiraan waayeelka iyo dadka naafada ah Jaangooyada Warshadaha ee JIS X 8341-3: 2016 "Tilmaamaha Naqshadeynta ee Waayeelka iyo Dadka Naafada ah-Qalabka Aaladda Macluumaadka iyo Isgaarsiinta" , Software iyo Adeegyada-Qeybta 3: Mawduuca Webka, iyadoo ujeedadu tahay u hogaansanaanta heerka "AA".
* Qoraalka "u hoggaansanaanta" siyaasaddan wuxuu ku saleysan yahay ogeysiiska lagu qeexay Guddiga Kaabayaasha Helitaanka Websaydhka Golaha Macluumaadka iyo Wada Xiriirka "JIS X 8341-3: 2016 Tilmaamaha Ogaysiinta U hoggaansanaanta Nuxurka Webka - Maarso 2016 Edition".
Ota Ward Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka Hoyga
Heerka waxqabadka bartilmaameedka iyo ka jawaab celinta
U hoggaansanaanta JIS X 8341-3: 2016 Heerka AA
Shuruudaha lagu guuleysto ee lagu daro
Waxyaabaha soo socda ee AAA
JIS X 8341-3 2.2.3 Shuruudaha Guusha Waqtiga-madaxbannaan
JIS X 8341-3 2.3.2 Shuruudaha guusha ee 3 nal
JIS X 8341-3 2.4.8 Shuruudaha Guusha booska hadda
Marka laga reebo
PDF (Foomka Dukumeentiga La Qaadan Karo) feyl
Faylka (Word (Microsoft Word))
Adeegyada laga bixiyo dibedda iyo waxyaabaha la socda ama bogagga internetka, sawirrada, fiidiyowyada, iwm.
* Tusaalaha 3.
Adeegyada ay bixiso google (raadinta gaarka ah ee google, fiidiyowyada youtube, google map, Google Street View, iwm.)
SNS (Twitter, Instagram, LINE, iwm)
Bogag luuqado badan ku hadla oo ay soo saareen tarjumaad otomaatig ah oo ay bixiyeen subdomains
Wax aan qoraal ahayn A 〇 〇
Codka kaliya iyo fiidiyowga oo keliya (waa la duubay) A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Araar (duubay) A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Faallo maqal ah ama waxyaabo kale oo loogu talagalay warbaahinta (la duubay) A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Qoraal (nool) AA - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Faallo maqal ah (la duubay) AA - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Macluumaadka iyo cilaaqaadka A 〇 〇
Amarka macnaha leh A 〇 〇
Astaamaha dareenka A 〇 〇
Isticmaalka midabka A 〇 〇
Xakamaynta codka A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Isbarbardhiga (heerka ugu yar) AA 〇 〇
Cabir cabir AA 〇 〇
Sawirka qoraalka AA 〇 〇
kiiboodhka A 〇 〇
No dabin keyboard A 〇 〇
Waqtiga la hagaajin karo A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Hakad, joogso oo dhuumasho A 〇 〇
Waqtiga oo madax banaan AAA - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
XNUMX nal ama ka yar qiimaha marinka A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
XNUMX jeer oo iftiin bir ah AAA - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Ka bood bood A 〇 〇
cinwaanka bogga A 〇 〇
Amarka diiradda A 〇 〇
Ujeedada xiriirka (macnaha guud) A 〇 〇
Micno badan AA 〇 〇
Cinwaanada iyo sumadaha AA 〇 〇
Muuqaalka diiradda AA 〇 〇
Luqadda bogga A 〇 〇
Luuqadaha qaar AA 〇 〇
Marka diirada la saarayo A 〇 〇
Waqtiga wax galinta A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Wareegitaan joogto ah AA 〇 〇
Kala soocid isdaba joog ah AA 〇 〇
Cilad aqoonsi A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Calaamadee ama sharaxaad A - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Tilmaamaha cilad bixinta AA - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Ka fogaanshaha qaladka (sharci, dhaqaale iyo xog) AA - 〇 Ma jiro waxyaabo ku habboon.
Kalabixinta A 〇 〇
Magaca, doorka iyo qiimaha A 〇 〇
* Laga bilaabo Maarso sanadka 3aad ee Reiwa
Lambarka taleefanka: 03-3750-1611